Izakhiwo ezisetyenziswayo kunye nesicelo se-thyme kunye neoli yayo ebalulekileyo
I-Thyme iyisityalo esingapheliyo kwintsapho yokucima (i-Lamiaceae). Isasazwa kakhulu kwiMpuma Ekude, eUkraine, e-Central Asia, eSiberia. Iintyatyambo kwiinyanga zasehlotyeni (ngoJuni-Julayi), kwaye iziqhamo ze-thyme zivuthwe ngoSeptemba. I-Thyme ineeqabunga ezingasemva kwe-ovoid. Iziqhamo zeso sityalo zihlala zide, zikhwebu. Isiqhamo sisincinci esincinci. Iintyatyambo zinombala we-lilac obala. Khipha ioli ye-thyme ebalulekileyo ukusuka kwingxenye yomhlaba.
Kwindawo yomhlaba ye-thyme iqulethe kwi-0, 5 ukuya kwi-1 ye-oli efunekayo. Ukongezelela, iqulethe izinto ezibuhlungu kunye neetanic, i-malic acid, i-resins, i-acetic acid, i-flavonoids, i-saleral minerals, i-omalonic acid.
Ioli efunekayo ye-thyme iqukethe i-carvacrol engama-15-20 kunye ne-30 ekhulwini ye-thymol - zizinto eziphambili ezinefuthe elinamandla.
I-Thymus ifunyenwe indawo kwiyeza lonyango njenge-diuretic, i-diaphoretic, i-softening, i-anticonvulsant. Isetshenziselwa ukunyanga ukukhwehlela, i-neuralgia, i-cramps zesisu. Xa i-rheumatism isetyenziswe ngendlela yelotions.
Ngenxa yokuba i-phenol ingena kwioli efunekayo, inemiphumo ye-antiseptic. I-Carvacrol - enye inxalenye eyinxalenye yeoli, yayisisigxina esinamandla kakhulu kwi-antimicrobial drug, kwada kwavela i-antibiotics kunye nezinye izidakamizwa zokulwa nezidakamizwa.
Izilungiso ezenziwe kule mveliso zicetyiswa ukuba zikhulelwe i-anemia, asthenia, i-intestinal atony, i-hypotension, izifo ze-bronchopulmonary, i-chlorosis, i-asthma, izifo ezithintekayo emathunjini kunye ne-urinary tract, ukuqokelela kwegesi emathunjini, kunye nesifo sofuba, umkhuhlane kunye nezinye izibanda kunye nezifo zokuphefumula, utyumba, ukungabikho kwenyanga, i-scabi, iibilisi, i-rheumatism, ukukhathala jikelele, i-pediculosis.
I-Thyme inomsindo ovuselela ingqiqo, ngoko kuya kuba luncedo kubantu abanesidenge, ababuthathaka. Ukongezelela, iphunga le-thyme linakho ukukhubaza i-air in spaces.
Yeka ukuhlanza kuya kunceda umhluzi we thyme. Yaye ukuba uthe waxiliswa yizinyosi kunye / okanye ezinye iinambuzane, yenza i-lotions kwi-herme ye-thyme. Ngephunga elimnandi eliphuma emlonyeni, kucetyiswa ukuba uthathe i-decoction. Yilungiselelwe imihla ngemihla, kwaye ithatha ixesha elide kwaye lingaphazamiseki.
Ukongezelela, umhluzi unokwakha kunye neepropenti eziphathekayo. Kunconywa ukuthatha ukuba kukho ukuphazamiseka kwenkqubo ye-nervous central, nge-sleepiness. Kuya kunceda ukulungelelanisa i-microstlora yamathumbu.
Ezinye iziyobisi zisebenzisa i-extract from the leaves, ene-propectorant property, iziyobisi zithathwa nge-bronchitis enzima.
Silungiselela ukukhishwa kwindlela yangaphakathi - i-1 ifuni ye-thyme ithululelwa kwiglasi enye yamanzi abilayo, ngoko kufuneka ifakwe emininzi imizuzu elineshumi, unokongeza ishukela elincinci. Sithatha ngaphambi kokutya 3-4 amaxesha ngosuku malunga nekota yeglasi.
Ioli ye-thyme iyimfuneko ithatyathwe ngunyosi, okanye kwisisombululo sesotywala kathathu ngosuku ukuya emanzini ama-5.
Ukusetyenziswa kweoli kunye ne-thyme kuqhelekileyo kwi-cosmetology kunye ne-dermatology, apho zisetyenziselwa uhlobo lweoli.
Xa ukubetha izinyoyi kunye neenyoka kusebenza ukuxinwa kwi-decoction kwioli yeoli, i-200 gram yeoli ithathwa i-2 tablespoons.
Kwizicumbiso, iipropthi ze-thyme zisebenza ngokuphumelelayo ekukhuseleni i-acne, ukuvuvukala okuxhasayo, i-herpes. Ikhusela ukulahleka kwentloko.
Ukuba unenkxalabo malunga neentlungu zesifo se-rheumatic - uthinte i-thyme, ukuyitshisa ngenye indlela yesitya, yifake kwi-gauze uze ufake isicelo esishushu.
Senza ukuhlamba okumnandi - i-gram e-500 ye-thyme kufuneka iphekwe kwi-4 litres zamanzi, ithululelwe kwibhethi ngqo ngamanzi. Le ibhedi iyisisombululo esisebenzayo se-arthritis, i-rheumatism, isifo.
Ukunciphisa ukulahleka kweenwele kwaye unike umphumo we-scalp tonic, kufuneka ulungiselele umhluzi ongeyilitha enye yesityalo.
Ukuba i-nerve ye-sciatic ikhupha ngokukhawuleza, lungise umxube wejisi le-thyme, ioli yeoli kunye newayini, uze uyihambise nalo mxube.
Silungiselela i-decoction evela kwingca, eyokumisa ukuphuma kwamanxeba amatsha, kucoca ulusu kwi-rash engafihliyo, ukucoca kunye nokususa amatye kwi-vestile - thatha isipuni 1 se-herbs ye-1 iglasi yamanzi.
Ukuba uphazamiseka kakhulu ngeentloko ezinzima, pheka i-thyme ngeoli kunye neviniga.
Ukucoca isisu nesibindi, kwiinconywa zonyango lendabuko, kufuneka uthabathe i-herme ye-thyme ngobusi. Ukunyuswa okufanayo kuya kunceda nge-colic.
Ukongezelela, ukunyuswa kwamanzi kungabangela umnqweno wesini kunye nokunceda ubuthathaka ngokwesini. Ukwenza oku, gaya ama-10 amagremu weengca uze udibanise nobusi namanzi, thabatha kathathu ngosuku.
Indlela yokuphilisa i-conjunctivitis?
Izindlela zamasiko zonyango lwe-long-term lymphocytic leukemia
Ingozi yezinambuzane ebomini bomntu
Iimpawu zokuzalwa zivela njani kunye nendlela yokuzikhusela?
Kutheni iinkophe zikhukhumeza kunye nokuvuvukala?
Isiqhelo soxinzelelo kubantu
Yoga ngokulahlekelwa ngokukhawuleza
Yiba yindlela: imifanekiso emithathu ekhanyayo yentsasa-2017
Iqoqo elikhulu lesiGrike: imihlobiso esuka eNikos Koulis
Imifuno kunye neziqhamo ezinemivithamini A ne-E
I-Snack "Iidola zeNew New Year's Nesting"
I-Piet Open Meat
Ukukhulelwa kungenziwa njani?
Iimveliso ze-microelements kunye namavithamini
I-Paris Hilton kunye noRick Salomon
INkosana William kunye noKate Middleton
Ukwabelana ngesondo kunye nendoda yeempawu ezahlukileyo ze-zodiac
I-meat minced ne-tomato unamathela
Hummus ngelamula kunye negalikhi